Injini yokuphosa i-Crankshaft efanelekileyo kwiPerkins 4.203 ngexabiso lefektri
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: Perkins135
I-30years injini yobuchwephesha kunye nomvelisi wamalungu etrektara
Isiqinisekiso sokuhambisa ngexesha
Iisampulu zinokubonelelwa ukuvavanya umgangatho
I-1103 Perkins zz90078 / 4181V107
Ngo-1104 uPerkins zz90239
Ngo-1004 uPerkins zz90143
135 UPerkins 31312730
Injini yokuphosa i-Crankshaft yePerkins135 ene-Oem Number 31312730 ngexabiso leefektri
Ukuchaneka okuphezulu kunye nokunxiba ukunxiba
Injini yokuphosa i-Crankshaft efanelekileyo kwiPerkins 1104 ene-Oem Number Zz90238 ngexabiso lefektri
Amandla crankshaft inzima kakhulu. Isebenza phantsi kwentshukumo edityanisiweyo yokutshintsha kwamaxesha amandla egesi, inertial force kunye nomzuzu wamandla, kwaye kuthwala imithwalo eguqukayo yokugoba kunye ne-torsion. Ke ngoko, i-crankshaft iyacelwa ukuba ibe namandla adinayo ngokwaneleyo kunye nokuqina ukuze uxhathise ukugoba kunye ne-torsion; Ijenali kufuneka ibe nendawo yokuthwala enkulu ngokwaneleyo kwaye inxibe ukuxhathisa. Sinikezela ngee-crankshafts zemoto zangaphambili zePerkins, uluhlu olupheleleyo lwePerkins, iikhroshafts ezintsha. Sinemveliso eyomeleleyo, ixesha elifutshane lokuhambisa, sinokuqinisekisa ukubonelelwa kweempahla, kwaye samkele abathengi ukuba bathethathethane ngeshishini. Sikwabonelela ngokubonisana ngemveliso ukuhlangabezana neemfuno zakho.
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: Renault R4
Le crankshaft New imoto ilungele Renault291
Iimodeli zeemoto ezifanelekileyo: Isuzu4BD1
Ukucinywa kwesiqwengana esiphakathi sokucinywa kwe-crankshaft kuyakwamkela isixhobo esilawulwa yi-microcomputer esilawulwa ngokuvulekileyo esiphakathi sesixhobo sokufudumeza esinezixhobo zokusebenza kakuhle, umgangatho ozinzileyo kunye nokusebenza okulawulekayo.
Imveliso yenziwe nge-ductile yentsimbi ephezulu kunye nentsimbi ebunjiweyo, kwaye inyangwa ngobuchwephesha bokomeleza ityhubhu yokuphucula amandla okukhathala e-crankshaft. Ilungele iimoto, iinqanawa, izithuthi zobunjineli, oomatshini bezolimo, iseti yejeneretha, umgangatho wokuqala, ngenkangeleko entle, uxinizelelo oluphezulu, ukutyibilika, ukukhanya kunye nokuqina emva kokugqiba. Imveliso nganye iye yavavanywa ngokungqongqo kwaye umgangatho wayo uqinisekisiwe. Ukupakishwa kwebhokisi kunembonakalo elungileyo kunye nomjikelo wemveliso ozinzileyo: iintsuku ezingama-20 ukuya ku-30 ​​zomsebenzi, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yothutho: umhlaba, ulwandle kunye nomoya.
Umgangatho ophezulu we-crankshaft yemoto ilungele iRenault1.9F8T
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: Renault1.9F8T
I-Injini yokuphosa iCrankshaft yePerkins1103 enenombolo ye-Oem zz90078 / 4181V107 ngexabiso leefektri
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: Perkins1103
Ngelixa silandela ukuphuculwa okuqhubekayo kweemveliso, sihlala sizimisele ukubonelela abasebenzisi ngamava enkonzo ekumgangatho ophezulu.
Ngesiqubulo esithi "inkonzo efanelekileyo, yentliziyo" kunye nomxholo "wobungcali, uxolo lwengqondo kunye nentlonipho", sizimisele ukwenza uluhlu olupheleleyo lweendawo ezisemgangathweni zobomi babasebenzisi.
Olunye usebenzo oluphezulu lweCrankshaft yezi modeli zilandelayo zemoto
Ishishini lethu eliphambili kukubonelela ngenkonzo elungelelanisiweyo
siya kubonelela inkonzo elicwangcisiweyo ngokusekelwe kwisampulu yakho okanye umzobo
Ixabiso linokuqikelelwa ukuba ungathumela iStroke - intonga yencwadana - ububanzi bejenali yentonga - eyona jenali iphambili - ububanzi bejenali ephambili - ubude bebonke - ipleyiti yefeni ezelwe
Izixhobo ezizenzekelayo ze-crankshaft ye-Perkins GDA 404 ene-Oem Number 115256750 ngexabiso lefektri
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: iPerkins404
Umgangatho ophezulu wecrankshaft yemoto ilungele iPerkins403 eneNombolo ye-Oem 115256950 ngexabiso lempahla
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: iPerkins403
I-crankshaft esemgangathweni yemoto yeToyota3RZ
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: iToyota3RZ
Crankshaft yeyona nto ibalulekileyo kwi-injini. Imelana namandla adluliswa ngentonga yokuqhagamshela kwaye ayiguqulele kwimveliso ye-torque kwi-crankshaft kwaye iqhuba ezinye izixhobo kwi-injini ukuba zisebenze. I-crankshaft ixhomekeke kumandla e-centrifugal ubunzima obujikelezayo, ukutshintsha kwamandla kwe-inertial amandla kunye nokubuyisela amandla okuphinda-phinda, okwenza ukuthwala i-crank kuxhomekeke ekugobeni nasekuthwaliseni umthwalo. Ke ngoko, i-crankshaft iyacelwa ukuba ibe namandla aneleyo kunye nokuqina, kwaye umphezulu wejenali kufuneka unganxibi, usebenze ngokulinganayo, kwaye ube nokulingana okuhle.
Imveliso yenziwe nge-ductile yentsimbi ephezulu kunye nentsimbi ebunjiweyo, kwaye iphathwa ngobuchwephesha bokomeleza ityhubhu yokuphucula amandla okudinwa kwe-crankshaft.Ifanelekile kwiimoto, iinqanawa, izithuthi zobunjineli, oomatshini bezolimo, iseti yomvelisi, umgangatho wokuqala, ngenkangeleko entle, ukuxinana okuphezulu, ukutyibilika, ukukhanya nokuqina emva kokugqiba. Imveliso nganye iye yavavanywa ngokungqongqo kwaye umgangatho wayo uqinisekisiwe. Ukupakishwa kwebhokisi kunembonakalo elungileyo kunye nomjikelo wemveliso ozinzileyo: iintsuku ezingama-20 ukuya ku-30 ​​zomsebenzi, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yothutho: umhlaba, ulwandle kunye nomoya.
Imoto esezantsi yemoto eqingqiweyo yeToyota2Y
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: Toyota2Y
Ukunciphisa ubunzima be-crankshaft kunye ne-centrifugal force eveliswayo ngexesha lokuhamba, iphephancwadi le-crankshaft lisoloko lenziwe lilize. Imingxunya yeoyile yenziwa kwindawo nganye yejenali ukulungiselela ukungeniswa okanye ukukhutshwa kweoyile yeinjini ukuthambisa umphezulu wejenali. Ukunciphisa uxinzelelo loxinzelelo, amalungu ejenali ephambili, isikhonkwane esincinci kunye nengalo eyomileyo zonke zinxulunyaniswa notshintsho lwearc.